Dhalmada iyo haweenka Job Description / Template Duty Oo Doorarka - JobDescriptionSample.org
Home / Uncategorized / Dhalmada iyo haweenka Job Description / Template Duty Oo Doorarka
Yacquub June 28, 2016 Uncategorized Leave a comment 1,808 Views
Dhakhaatiirta kaas oo ku siin biilasha daryeel caafimaad lala shaqada ama hooyada iyo kuwa la ogaado, xamili, iyo gacan ka hortagga xaaladaha Xaakimkii, gaar ahaan kuwa saameyn habka taranka ee. Waxa kale oo laga yaabaa in ay soo gudbiyaan daryeel caafimaad guud ee haweenka.
Is ogow of Mudanayaal iyo cinwaanka.
Muujin farsamooyinka iyo wada hadlaan natiijooyinka baaritaanka ama daawaynta siiyey isticmaalaya macaamiisha.
Taabta cudurada xubnaha dhedig.
La soco nno peopleA iyo horumar iyo dib xal sida loogu baahan yahay.
qaliin dheeraad ah sida ama dhammayn qaybo qalniinka caloosha loo baahan yahay in la joogteeyo caafimaadka peopleWI iyo soo saaro ilmaha si ammaan ah.
Qori ama abaalmarin daawaynta, daawo, iyo sidoo kale daryeel caafimaad oo gaar ah in uu yahay oo kale in lagu daweeyo ama loo yareeyo xaalad, cudurka, ama waxyeello.
Imtixaan macluumaad hubi-up, sheekooyin, hubi faa'iidooyinka, ama waraaqaha si ay u falanqeeyaan xaaladda bukaanka.
Ururi, file, iyo sii haynta xogta shakhsiga, sida taariikhda caafimaadka, sheekooyin, iyo natiijooyinka imtixaanka.
Hagaha bukaanka iyo dadka bulshada wax ku saabsan ka hortagga cudurada, iyo dhaqdhaqaaqa, nadaafadda.
Qisoon sufferer takhasus in uu yahay oo kale ama khabiir caafimaadka marka loo baahdo.
Ka hubi ama siiya dhakhaatiirta dheeraad ah xal booqanaya.
falalka deg deg ah oo agaasin ee practitioners , ardayda, caawiyeyaasha, xirfadlayaasha, kalkaalisooyinka, oo ay la socdaan shaqaalaha kale ee daryeelka caafimaadka.
Strategy, codsan, ama maamulo codsiyada caafimaadka ee shirkadaha, ama xaafadaha ku saabsan daawo iyo ka fogaanshaha shilalka ama nno.
Diyaari Dowladda iyo shirkadda warar ku saabsan Kurtumm shaqaalaha, gaarsiinta, dhimanayaan, iyo stats cudurka, ama laga yaabee in sumcadda caafimaadka qofka.
Qabtaan waxbarasho in ay soo saaraan ama fiiri daaweynta, daroogada, ama farsamooyinka si looga hortago ama loo xakameeyo cudurka ama dhaawac.
Waxqabadka shaqo u Baahan
Akhrinta cutubyada fahamka-fahamka iyo content abuuray ee waraaqaha shaqada ku jira ee la xiriira.
Active Dhagaysi-Siinta wacyiga oo dhan waxa ay dadka kale la yidhi, waqtiga iyo tamarta ay u garto waxyaalahaan helitaanka la abuuray, weeydiin weydiimo sida ku haboon, oo aan kalagoynta at jeer in ay yihiin aan habboonayn.
Soo saaridda-On warqad ma aha sida aan habboonayn ee shuruudaha suuqa tiimbanaynay hufan.
Xariirinta la-hadlay dadka kale si ay ula wadaagaan xogta effortlessly.
Xisaab-Isticmaalka xisaabta si loo xaliyo dhibaatooyin.
xal Technology-Kafaa'iidaysiga iyo mabaadi'da sayniska si ay u xaliyaan dhibaatooyinka.
Fikirka in ay tahay sabab u muhiim-Kafaa'iidaysiga iyo sabab loo garto ayna duleella iyo awoodaha ka mid ah fursadaha doorashada, fikrado ama habab dhibaatooyin.
labada joogo oo iman kara xalinta dhibaatada iyo go'aan qaadashada Learning-ogyahay saamaynta macluumaadka cusub ee ku saabsan Active.
Barashada Qaababka-Doorashada iyo isticmaalka hababka iyo nidaamyada educationANDtutorial haboona xaaladda gaar ah marka barashada ama arrimaha baridda kuwa cusub.
Kormeerka-Kormeerka / shaqeynayaan Go'aaminta dadka dheeraad ah, naftaada, ama shirkadaha si ay u sameeyaan horumar ah ama qaadaan tallaabo sixid ah.
Social Perceptiveness-In ka dhawrsada kuwa kale’ Doonista sababta ay dhahaan sida ay sameeyaan iyo aqoonta.
falalka Coordination-qabsashada la xiriira kuwa kale’ dhaqanka.
Salesmanship-xaadh dadka kale in la beddelo caadooyinka ama madaxooda.
Dhexdhexaadinta-Siinta kuwa kale si wadajir ah oo dooneysa in ay heshiiyaan kala duwanyahay,.
Dhacdooyinka-Tababarka dadka kale loogu taraaroxo u dhaqaaqdo.
Orientation-firfircoon Service raadinayaan xeelado si ay u caawiyaan dadka waawayn.
Advanced Problemsolving-Aqoonsiga arrimaha adag iyo cilmi baarista xaqiiqooyinka lala qiimeeyaan iyo in la dhiso ilaa doorashooyinka iyo hirgelinta fursadaha.
Hawlgallada Research-barashada shuruudaha baayacmushtarkaagii iyo waxay u baahan tahay in ay soo saaraan qaabka a.
Technology Design-Building ama simaya qalab iyo teknoolajiyada si ay u caawiyaan shuruudaha qofka.
Qalabka Selection-Go'aansiga qalab iyo qalabka ee sort si dhab ah loo baahan yahay si ay u fuliyaan xirfado.
daydo wajigeeda-xiridda, qalabka, fiilooyin, ama baakadaha si ay u gutaan Details.
barnaamijyada computer Development-Publishing ku saabsan ujeedooyinka in dhowr.
imtixaanada Operation Tracking-kuurgalo, burooyinkoodii, ama calaamado kala duwan si loo hubiyo in ay jirto mashiinka ku samaynaysaan haboon.
Hawlgallada iyo hawlgallada xamili-Maareynta nidaamka ama alaabta.
Dayactirka-Sameynta dayactirka waa caadiga ah ee marsho iyo go'aan goorta iyo waxa sort of dayactirka loo baahan yahay waxay noqon doontaa.
Dhib-Go'aaminta arrimaha ka dambeeya qaladaad in ay yihiin shaqeeya iyo doorashada waxa jihada si ay u tagaan oo ku saabsan this.
barnaamijyada ama alaabta dayac-doonnida kula isticmaalaya qalab la doonayo.
Quality Control-baadhista iyo qiimaynta ee alaabta imtixaanka-Sameynta, bixiyeyaasha, ama nidaamyada si ay u xukumaan fiican ama ka shaqeynayaan.
View iyo go'aan-qaadasho-ka fikirto faa'iidooyinka iyo qiimaha guud ee talaabooyin in ay yihiin iman kara in la doorto mid ka mid ah ugu habboon.
hagaajinta Falanqaynta-Garashada waxa sort of nidaamka waa in shaqeeyaan iyo sida hawlaha, xaaladaha, oo ay la socdaan deegaanka saameyn ugu yeelan karto macaashka.
Systems Qiimeynta-Go'aaminta talaabooyin ama tilmaamo ah waxqabadka nidaamka iyo qaraabo in ay gool ka mid ah qalabka, sax ama dabeecada loo baahan yahay in kor loogu qaado waxqabadka.
Time-Management-qabashada dadka kale’ munaasabadda sidoo kale oneis daqiiqad shakhsiyeed.
Maamulka Financial Resources-Go'aansiga sida lacag caddaan ah ugu dhakhsaha badan loo isticmaali doonaa in ay shaqada dhammeeyo, iyo iibka biilasha, kuwaas oo.
Maamulka Qalabka Resources-Helidda iyo xusayaan in ay isticmaalka saxda ah ee wax soo saarka, shirkadaha, iyo qaybaha lahaa baahan yahay in la sameeyo shaqo gaar ah.
Kormeerka Shaqaalaha Resources-Sameynta, xiiso, iyo dadka toosiyaan inta ay qabtaan, kala shakhsiyaadka aad ugu wanaagsan ee hawsha.
Qualification tababarka Shuruudaha aqoonta
In ka badan 4 sano, A.villa 6 sano oo ay ka mid yihiin,
Career Leadership Skills Horudhac ah
Guulaha / day – 96.18%
Determination – 94.79%
Iskaashiga – 95.73%
Arrinta, waayo, Kuwo kale – 96.80%
Positioning Bulshada – 87.01%
Is Control – 96.39%
gaynta cadaadis – 97.20%
joogtona – 99.20%
Wacyigelinta ee Detail – 99.20%
Fikirka – 91.53%